Wafdigan oo uu hoggaaminayay Cali Guudlaawe oo gellinkii dambe ee maanta booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wafdigan oo uu hoggaaminayay Cali Guudlaawe oo gellinkii dambe ee maanta...
Wafdigan oo uu hoggaaminayay Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa gellinkii dambe ee maanta booqasho rasmi ah ku gaaray magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga.
Xubnaha wafdiga waxaa kamid Xildhibaan Cabduqaadir Caraboow oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaana si diirran loogu soo dhaweeyay garoonka Diyaaradaha caalamiga ee Istanbul
Soo dhaweynta Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle,Cali Guudlaawe ayaa waxaa ka qeybqaatay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul, Ganacsato, haween, Dhallinyaro iyo qeybaha bulshada.
Sidoo kale Cali Guudlaawe oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loogu sameeyay magaalada Istanbul, isagoo inta uu joogo dalka Turkiga uu kulamo la qaadan doona mas’uuliyiinta dalka Turkiga iyo Jaaliyadda Hirshabeelle ku nool magaalada Istanbul.
Previous articleMadaxweynaha Puntland Deni oo Xeer Madaxweyne Lr. 17 ku magacaabay Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku-xigeenka Degmada Godobjiraan.
Next articleMadaxweynihii aasaasay Zambia oo geeriyooday, isagoo jira 97, sida ay xaqiijeen xubno ka tirsan qoyskiisa.
Madaxweynaha dalka Masar oo ka hadlay xaaladda dalka Libya shegayna...
Madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah Al-Sisi ayaa ka hadlay xaaladda dalka Libya, isagoo sheegey in ay muhiim tahay in dadka Libya loo daayo in...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo Muqdisho kula kulmay Wakiilada Qaramada Midoobe, Midowga...